सुत्केरीभन्दा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी छ – Health Post Nepal
सुत्केरीभन्दा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी छ
२०७५ मंसिर ५ गते १४:५८
डा. विपना कुँवर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, ताँहु पाल्पामा एक वर्षदेखि कार्यरत छिन् । स्वास्थ्यकेन्द्रमा मुख्यगरी मौसमअनुसारका बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । त्यसमा छिमेकी गाउँहरूमा रहेका स्वास्थ्यचौकीहरूबाट रेफर गरिएका बिरामी र ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या बढी छ । यसैगरी स्वास्थ्यकेन्द्रमा गर्भपतन सेवा र सुरक्षित सुत्केरी सेवा पनि उपलब्ध छ । प्रस्तुत छ, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको सेवा र जनस्वास्थ्यका विषयमा केन्द्रित रही केन्द्रकी निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. विपना कुँवरसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्वास्थ्यकेन्द्रमा बिरामीको चाप कस्तो छ ?
यहाँ आउने बिरामी भनेका मौसमअनुसार प्रभावित बिरामी हुन् । मौसमी भाइरल, झाडापखाला, दमका साथै हाइपोटेन्सन, मधुमेह र ल्याब सेवाका लागि आउने बिरामी बढी छन् । हामीकहाँ छिमेकका क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यचौकीले रेफर गरेका बिरामीको चाप हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्यकेन्द्रले पुर्याउने स्वास्थ्य सेवा के–के हुन् ?
स्वास्थ्यकेन्द्रले गर्ने भनेको सामान्यखालका सबै बिरामीको स्वास्थ्यपरीक्षण हो । त्यसका साथै हामीकहाँ परिवारनियोजनको आइयुसिडी, इनप्लान्ट सेवा, सुरक्षित सुत्केरी, गर्भपतन सेवा, ल्याब सेवा, इसिजी सेवा उपलब्ध छन् । स्वास्थ्यकेन्द्र भएको हुँदा तीन बेडको चौबिसघण्टे इमर्जेन्सी सेवा छ ।
स्वास्थ्यकेन्द्रमा सुत्केरी र गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या हाराहारीमा छ । गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा हामीकहाँबाट ६३ जना सुत्केरी भएको रेकर्ड छ भने ६४ जनाले गर्भपतनको सेवा लिएको अवस्था छ । यो अवस्था सामान्य हो जस्तो लाग्दैन ।
स्वास्थ्यकेन्द्रमा किशोर–किशोरीले लिने स्वास्थ्यसेवाको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले किशोरमैत्री स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ । किशोर–किशोरीलाई अनुकूल हुने गरी सेवा दिने भएको हुँदा कार्यक्रमको नाम त्यसरी दिइएको हो । कार्यालय समयमा स्वास्थ्यकेन्द्रमा मात्र नभई अरू समय र गोप्य स्थानमा भेटेरसमेत सेवा दिने व्यवस्था गरेका छौँ । हामीकहाँ उनीहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले टेलिभिजन र स्वास्थ्यशिक्षा सामग्री राखिएको किशोर–किशोरी कर्नरको पनि व्यवस्था छ । स्वास्थ्योपचार सेवा लिन आउने गरे पनि किशोर–किशोरीले उक्त कर्नरबाट भने खासै फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्यकेन्द्रमा सुरक्षित सुत्केरी र गर्भपतन गराउन आउनेको संख्या कस्तो छ ?
स्वास्थ्यकेन्द्रमा सुत्केरी र गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या हाराहारीमा छ । गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा हामीकहाँबाट ६३ जना सुत्केरी भएको रेकर्ड छ भने ६४ जनाले गर्भपतनको सेवा लिएको अवस्था छ । यो अवस्था सामान्य हो जस्तो लाग्दैन । यो स्वास्थ्यकेन्द्रले ९ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा दिँदाको अवस्था हो ।
सुत्केरीकै हाराहारीमा गर्भपतन गराउन आउनुमा के–कस्ता कारण छन् जस्तो लाग्छ ?
सेवाग्राहीसितको सोधपुछ र कुराकानीमा अत्यधिक मात्रामा नचाहँदानचाहँदै, झुक्किएर गर्भ रहन गएको भनाइ आउने गरेको छ । सानै उमेरमा आमा बन्ने र बच्चा बढी भइसकेपछि अर्को बच्चा नचाहनेहरू पनि भेटिने गरेका छन् । अर्को कुरा भनेको विवाहित जोडी रोजगारीका लागि बिदेसिनुका साथै विभिन्न कारणले सँगै नरहने, २–३ वर्षमा एकपटक मात्र भेट हुने, परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगमा बानी नहुुँदा, साधन प्रयोगको ज्ञान नहुँदा गर्भ रहने गरेको पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा पनि गर्भपतन गराउने बढेका हुन् भन्ने लाग्छ ।
गर्भपतनसेवा लिनेहरूलाई परामर्श पनि दिने गरिएको छ कि ?
हो, पक्कै पनि छ । सानो उमेरमा गर्भवती हुँदा, छिटो–छिटो गर्भवती हुँदा हुने असरबारे जानकारी दिने गरेका छौँ । यसका साथै परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग गर्न, स्थायी बन्ध्याकरणलाई प्राथमिकता दिनका लागि परामर्श दिने गरेका छौँ ।
स्वास्थ्यकेन्द्रका मुख्य समस्या के छन् ?
स्वास्थ्यकेन्द्र ताँहु बजारदेखि केही मिटर तल रहेको हुँदा यहाँसम्म आउनका लागि सानो गाडीलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । सुत्केरी गराउन र भएका महिलाका साथै अशक्तहरूलाई सडकका कारण अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । त्यसैगरी हिउँद लागेसँगै स्वास्थ्यकेन्द्रमा पानीको अभाव सुरु भएको छ । स्वास्थ्यकेन्द्रमा एम्बुलेन्ससेवा पनि नभएको हुँदा बिरामीले भनेको समयमा उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् ।
डा. विपना कुँवर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, ताँहु, पाल्पामा कार्यरत हुनुहुन्छ
प्रस्तुति : कृष्ण मल्ल
डा. विपना कुँवर